"100 trillion dollars was only enough to buy a weekly bus ticket" #worldfinanceweds - Critical Math
Date of Article: June 2015
People with accounts of up to 175 quadrillion (175,000,000,000,000,000) Zimbabwean dollars will be paid $5. Those who preserved bills at home will receive a rate of 250 trillion to $1 for their 2008-issued notes and 250 to $1 for their 2009-issued notes.Zimbabwe has been using the US dollar since 2009 when the use of the Zimbabwean dollar was abandoned.
An egg costs 50 billion Zimbabwean dollars. A loaf of bread then cost as much as 12 new cars could have cost 10 years before. Prices doubled every 25 hours, which gave Zimbabwe the second-worst hyperinflation in history, behind post-war Hungary. The same year, Zimbabwe printed its highest denomination banknote, at 100 trillion dollars it was only enough to buy a weekly bus ticket. Hyperinflation in Zimbabwe gained momentum in 2000 when Robert Mugabe, who has been the country’s President since 1987, changed his economic policy and implemented land reform. Mugabe granted farmland owned by white citizens to indigenous black Zimbabweans, who were uneducated and knew nothing about farming. As a result, Zimbabwe turned from an agriculture exporter into an importer, which resulted in 94 percent unemployment and hyperinflation.
Source: Zimbabwe phases out local currency at 35 quadrillion to US$1 — RT Business